Ibsa Ijjanno Kominiitii Islama Oromo Edmonton - Ayyaantuu News
Ibsa Ijjanno Kominiitii Islama Oromo Edmonton Caamsaa 15, 2012
Haatahuu malee, Bara xaaliyaan irraa kaasee mirgi muslimoota itopia bifa waliigalaatti ilaalcha waan argatee fi Hailasellaseeniis akka duritti akka ummata kana ukkaamsuu hin daandeenye eega dhugoonfate booda mirgoota tokko tookko kennufii jalqabe. Mangistuu fi Mallas Zenawis akka abbootii isaanii hordoftoota amantii kanaa ija shakkii fi gad aantummaan laalaa turuu fi ammallee akkasumatti itti jiraachuun waan dhokataa miti.
Kessattuu muslimoonni Oromoo rakkoo tana bifa dachaattiin baadhachaa turan. Oromummaanuu yakka tahee osoo jiruu gubbaarraan amanti biyya sana keessatti akka olitti ibsinetti laalamtu hordofuun hagam akka ulfaataa tahe warren dhimmi kun illaalu qofa osoo hin tahin namoonni ija naasuu dhala namaa qabduun waa hubatan hundi ni beeku jennee abdanna.
Akkasumatillee, biyyattii sana keessatti rakkoon amantii tun rakkoolee hafan kan biraa kan akka siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaan walitti hidhamtee daran xaxamtee akka jirtu namuufuu ifaadha.
Irra caalatti rakkoolee jennu kanneen akka daranuu hafraawan kan godhe motummoonni habasha dhufaa dabraan faahidaa angoo isaanii guutachuuf bifa adda addaatiin harka keessa galfachuudha. Amantiin haarawni arra maqaa al-Habashiin ka’ee jeeqama kanaaf sababa tahe kun fakkii guddaadha.
Kana irraa kan ka’e mootummaan habashaa waldabroon waayee amantii kanaatiif tasuma naasuu fi qosaata akka hin qabne seenaa irraa kaasee haga guyyaa kaleessa kan Asaasatti ilmaan Oromoo mesha maleeyyii rasaasaan hurgufaniitti ittuma jiru jechuudha.
Akka olitti kaasuuf yaalletti mootumoonni habaashaa kanneen rakkoolee olitti kafne hunda kara nagayaa fi gamnummaan, maariin hiiku irra amaantiilee biyya sana keessa jiran walitti buusuu fi amantuma takka keessattuu hookara galchuun yeroo ibiddi qabatee- dubbiin jabaatte rasaasaan ukkaamsu filatuu dha. Arraas wanni godhame kanuma.
Hubannoo kana irraa ka’uudhaan nuti Muslimni Oromoo Magalaa Edmonton, Kanada fi naannoo isii jiraannu walitti dhufuudhaan dhimma yeroo ammaa Oromiyaa fi nannoolee addaaddaa tan itoopiyaa kessatti rawwatamaa jiran laalchisee bal’inaan eega wal marihanne booda dhaabbii keenya kan balaaleffannaa bifa asii gadiitti dabarsinee jirra.
1) Duursinee haadhaa abbaa ilmaanii fi obboleeyyan warren qabsoo haqaa tanaaf lubbuu isaanii dhabaniif jajjabina haa kenne; warren lubbuu dhabaniis jannataan haa qananiisu jechaa gadda nutti dhagayame dabarsinaafi.
2) Motummaan EPRDF yakka maqaa amantii Islamaatiin ummata keenya irratti raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabu cimsinee hubachiifna.
2) Mootummaan kun warren sababa kanaan lubbi isaanii dhabaniif itti gaafatamummaa halduree tokkoon maletti akka fudhatu hubachisaa- kana tahuu baannaan balaa itti aanuuf haala mijjeessaa akka jiru mootummaan addumyaa akka hubattu beeksifna.
3) Nuti ilmaan Oromoo Kiristiana, waqeffata osoo hin jenne toftaa wayyaaneen amantiin adda nu fofootee nu dhabamsiisuuf deemtu kana itti damqnee harka walqabannee qabsoo bilisummaa fi walqixxummaaf goona akka fiixaan baafnu waamichi isinuuf goona.
4 )Nuti Kominiitiin Islama Oromoo Edmonton humana, beekomsaa fi qabeenya qabnuun ummata keenya kan haqaa fi dhugaa isaaniitiif falmaa jiru maddii akka dhaabbannu irra deebinee mirkaneessina
5) Mootummaa addunyaa, warren mirga dhalanamaa fi walqixxummaa amantiitiif dhaabbattan hundi soba Mootumman Malas maqaa fokkataa arra addunyaan jibbamu-hookkarummaa( terrorism) nuu kennee- haqa keenyaa fi dhiiga keenya dhimuu waan barbaaduuf waan kana dhara tahuu hubattanii warren haqa ofiitiif falmatu maddii akka dhaabbatan yaamicha isiniif goona.
Injifannoon Abbaa Haqaatiif Haa ooltu.
–Boru Waaqoo gutichoo@gmail.com
7 comments - What do you think? Posted by admin - 14/05/2012 at 11:20 pm Categories:
7 Responses to “Ibsa Ijjanno Kominiitii Islama Oromo Edmonton”
Qabsoo Jabeessaa says:	15/05/2012 at 2:21 am	ejjannoo gariidha!
Yaa ilmaan Oromo, rakkinootin adda adaa kan numarsaa jirani fi saba kam iyyuu caalaa kan gara keenyatti kan heddoomaa jiru kun sababin isaa Oromumaa keenya dha. Keessumaahuu yeroo ammaa maqaa amantiitiin nu ajjeesaa, Saboota gara biroo hidhachiisanii nu ajjeesisaa, fi yoo danda’ameef laffa irraa saba Oromo Dhabamsiisuf badaa dalagaa jiru. Kunis waan ta.eef beekamaa dha, maaliif yoo jennee; qabsoo Ilmaan Oromo gabrummaa bara dheeraadhaaf baachaa ture ofi irraa fonqolchuuf yeroo isa dhumaatiif waan qabsawaa jiruuf karaa irraa numaqsuuf toftaa fi mala wayyaanee ta’uu isaa damaqnee waliin hiriruun yeroon isaa Amma dha. Oromiyaan Nibilisoomtti!!!
Galata Qumbi says:	15/05/2012 at 3:05 am	Oroomo tahuun waan alaagan hin beeken kan namo boonsu, kan lammin adunyyaa hunduu waal dandaahu dadhaabe, Amaantin wal dandaahu kenyaa!! Hordoofan amaanti kiristana, Isilama ykn waaqefata waaliti dhufee kayyo walof garaa tokkon yeroo maarihatu agaarra! Rakkoon Ummaata oromo isaa amaanti kirstanati dhufu, inni Islaama dhukkubefi, maada Musilimaaf inni waaqefate goddanisa isaa baate, gaaragaruma amaanti kenyaa dhifne egeerefis dinaa addan nu hiru deemu duraa dhaabachun dirqaama oromo hundaati!! Haara gaaru maaqa amantitin waayanen daaba inni lammi kenyaa irraatii godhu Oromon amaanti kaamiyu hordofu kan duraa irraa daraan waalin falmaachun dirqaama seenati! Injifaanon Ummaata Oromof!
jalatoo sabaa says:	16/05/2012 at 6:15 pm	galani kheeysan gudaadha jabaadha
ADEM says:	16/05/2012 at 6:51 pm	yaa Ilmaan Oromo wanni hubachuu Qabdan Gocha Sukaneessa akkanaa kana kan hojjate wayyaane Callaa miti kan waliin Qindeesse Jarsa Tortoraa LENCO LATAA akka Tahe Dagachuu hin qabdan kanaas wanni godhee Amantiin walitti hidhata waan Qabuufi kanaas sirritti hubchuu Qabna
OROMON TOKKO GARAGARUMMAA AMANTII TIN ADDAN HIN BAATU
mohammed seid says:	10/03/2013 at 6:34 am	galatoomaa…nu jiraadhaa..,waa haaraa qabdan nuuf dabalaa. Nutis waa barbaachisu hunda goodhuuf qophii dha.Akkamuul’atutti irra caalaa oromummaa osoon taane kan cunqursaaf nu keenne islamummaa tahuun hin dagatamu.sababnis maqaa isalaamatin waraana yoo banan biyyoonni islaamaa waan moormaniifidha.osoo ta’uu baatee maaltu saba kaanirraa maaltu addanugodhe.
kamel jibril says:	01/01/2014 at 1:12 pm	Rabbin isin haagargaru rabbin tokko nu haagodhu aduwwi nujalaa adabsuu
bunii bunaa says:	06/05/2014 at 10:36 am	Rabbii nu haagargaaru